बागलुङमा १० दिन निषेधाज्ञा- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार
बागलुङमा १० दिन निषेधाज्ञा
बागलुङ — बागलुङमा मंगलबार बिहान ६ बजेदेखि निषेधाज्ञा लगाइएको छ । कोरोनाका संक्रमित बढ्दै गएपछि बागलुङ उद्योग वाणिज्य संघ र स्थानीय पालिकाको सिफारिसमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको हो ।
मंगलबारदेखि वैशाख ३१ गतेसम्म दस दिनका लागि निषेधाज्ञा जारी भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवकुमार कार्कीले बताए । निषेधाज्ञाको अवधिभर बैंक तथा वित्तीय संस्था दैनिक ११ देखि १ बजेसम्म मात्रै खोल्ने, अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा हेर्ने बताइएको छ । सोमबार बसेको बार बेन्च बैठकले फौजदारी घटनाको मुद्दा दर्ता गर्ने, बालबालिका तथा हिंसापीडितको मुद्दा भए दर्ता गर्ने निर्णय भएको जिल्ला न्यायाधीश वासुदेव न्यौपानेले बताए ।
कोरोनाले ३० वर्षीयाको मृत्यु
कोरोना संक्रमण भएर उपचार गराइरहेकी एक महिलाको धौलागिरि अस्पतालमा सोमबार राति मृत्यु भएको छ ।
ताराखोला गाउँपालिकाकी ३० वर्षीया जनप्रतिनिधि महिलाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो । वैशाख १९ गते मात्रै उनमा कोरोना पोजेटिभ पुष्टि भएको थियो ।
श्वासप्रश्वासको समस्या देखिएकी ती महिलाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. शैलेन्द्र पोखरेलले बताए । उनको तीन दिनदेखि सघन उपचार कक्षमा उपचार भइरहेको थियो ।
प्रकाशित : वैशाख २१, २०७८ ०८:४०
दुई दिनमै भरियो हेटौंडाको कोभिड वार्ड
हेटौंडा — हेटौंडामा कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि निर्माण गरिएको कोभिड वार्ड दुई दिनमै भरिएको छ । संक्रमित बिरामीको संख्या अप्रत्याशित बढेसँगै हेटौंडा अस्पतालमा सञ्चालनमा ल्याइएको भेन्टिलेटरसहित ६ शय्याको आईसीयू र २४ शय्याको एचडीयू रहेको वार्ड भरिएको हो ।
अस्पतालका कोभिड फोकल पर्सन डा. सागर काफ्लेका अनुसार जिल्लाबाहिरका समेत बिरामीहरू हेटौंडा आइरहेका छन् । ‘तराईमा संक्रमित बढिरहेका छन् । चितवनका अस्पतालहरूबाट रेफर गरिएका बिरामी उपचारका लागि यहाँ आइरहेका छन्,’ संक्रमितको चाप हेर्दा ‘थेग्नै नसक्ने’ अवस्थामा पुगेको भन्दै उनले थपे, ‘त्यसैले जटिल संक्रमित मात्र भर्ना गरेका छौं । सामान्य लक्षण भएकालाई परामर्श दिइरहेका छौं ।’
हाल अस्पतालका ५० जना चिकित्सक र ६६ जना नर्ससहित २ सय ५६ स्वास्थ्यकर्मी संक्रमितको उपचारमा खटिरहेका छन् । सक्रिय संक्रमितमध्ये ६ सय ७६ जना होम आइसोलेसन र ३२ जना हेटौंडा अस्पतालमा छन् । मेसु श्रेष्ठले परीक्षणका लागि भीटीएमको पनि अभाव देखिन थालेको बताए ।
६ संक्रमितको मृत्यु
कोरोनाका कारण मकवानपुर र चितवनमा गरी थप ६ जनाको मृत्यु भएको छ । संक्रमणपश्चात् हेटौंडा अस्पतालमा उपचाररत तीन जनाको पछिल्लो २४ घण्टामा मृत्यु भएको मेसु श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार मृत्यु हुनेमा बारा अमलेखगन्जका ४६ र हेटौंडा–१ का ५५ वर्षीय पुरुष तथा महोत्तरी–२ जलेश्वरकी ५० वर्षीया महिला छन् ।
श्वासप्रश्वासमा समस्यापछि भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेकामा उनीहरूको मृत्यु भएको हो । योसँगै कोरोनाको दोस्रो लहरयता जिल्लामा मृत्यु हुने संक्रमितको संख्या पाँच पुगेको छ । उता भरतपुरस्थित चितवन मेडिकल कलेज (सीएमसी) को शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत संक्रमितमध्ये १२ घण्टाभित्रै तीन जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा बारा, रूपन्देही र कपिलवस्तुका पुरुषहरू छन् । अस्पतालका निर्देशक डा. दयाराम लम्सालका अनुसार उनीहरूमा ज्वरो, श्वासप्रश्वास, टाउको दुख्नेलगायत समस्या थियो ।